Dubai Water Canal Cruise | Gaa n'ihu ịhụ Dubai site na Echiche Ọhụrụ
Ọdụ ụgbọ mmiri mmiri mmiri nke Dubai
Ahụla m Osimiri Mmiri Dubai ọtụtụ ugboro site n'ebe dị anya ma na-enwe mmasị mgbe niile. Mmiri mmiri na agba na-adọrọ adọrọ na-adọrọ mmasị. Mgbe m nụrụ nke Ụgbọ mmiri mmiri mmiri na Dubai, Echere m na ọ ga -abụrụ m ezigbo ohere ịhụ ya nso.
Ka m na-aga na mmiri e ji enyo mee ka a nabata m Kahwah (Kọfị Arabic) wee duru m gaa na tebụl m. Ihe sochiri ya bụ mmanya ọ welcomeụ welcomeụ na ụfọdụ nri nrị. Ụgbọ mmiri ahụ bara n'ime mmiri ka onye ọ bụla hụ Dubai site n'echiche ọhụrụ.
Ị nwere ike nabata ịma mma nke Dubai ka ị na -aga. Ngwakọta nke ihe owuwu ọgbara ọhụrụ na nke oge ochie gbara gị gburugburu. Na -eju anya na nlele abalị Bridge Bay Bridge, Dubai Festival City Nnukwu .lọ Ahịa, Burj Khalifa, Ọwa mmiri Canal nke Dubai, Ụlọ nkwari akụ JW Marquis, na Westin Hotel. Ọzọkwa, banye na ịma mma nke Dubai Creek n'abalị. Ọwa mmiri wuru na-ejikọ mpaghara azụmahịa Bay na Ọwara Persian site na Safa Park na Jumeirah. Site n'ebe dị anya, onye ọ bụla nwere ike ịbanye na ntụrụndụ na-ekpo ọkụ nke obodo na egwu Arabic na-egwu n'azụ. Nweta ịdị elu nke ịdị ebube na itinye udo na ịdị jụụ nke mmiri iyi.
A na-ekesa nnukwu nri nri, salad ọhụrụ, anụ a ṅara n'ọkụ, ofe, na desserts n'ofe tebụl ka mụ na ndị ọbịa ndị ọzọ nwee mmasị. Ntụrụndụ nọkwa na ya kacha elu. Onye ọ bụla nwere ike ịpị ụkwụ ya na egwu egwu egwu Tanoura dị ka mgbede na-enwu site na ejiji ọkụ nke onye na-agba egwú. Onye na-agba egwu na-agbagharị ma na-atụgharị na egwu na-adọrọ adọrọ nke dọọrọ mmasị onye ọ bụla.
Ọwa mmiri ahụ gbatịrị kilomita 3.2 nke na-agafe Sheikh Zayed Road, Jumeirah Road, wee banye n'okporo ụzọ ahụ. Ọwara Arab. Otu nwere ike ịhụ ala nke ọmarịcha ụkpụrụ ụlọ na akụrụngwa ọgbara ọhụrụ, nke mmiri mara mma gbara ya gburugburu nwere ọmarịcha echiche na ọkụ nke mbara igwe Dubai.
Ọwa mmiri Canal Dhow bụ ahụmịhe, na -ese n'elu ụlọ elu na okporo ụzọ ndị kacha ekwo ekwo nke Dubai n'okpuru ọmarịcha nsụda mmiri. Mgbe ịbanye Dubai nwee ọmarịcha ahụmịhe iri nri ka ị na -agafe ọwa mmiri. Ịgbagharị n'okpuru Ọwa Mmiri Dubai bụ ahụmịhe agaghị echefu echefu.
By eze 21|2022-05-23T17:53:29+05:30January 9th, 2019|blog|Comments Off na njem ụgbọ mmiri mmiri mmiri Dubai